About Us - Infinity-Electron.com - Mpanatonta Electronic Components
Infinity-Electron.comNy fitaovana elektronika elektronika lehibe indrindra manerantany
ilay mpaninjara maneran-tany manokan-tena ao amin'ny Integrated Circuits (ICs), RF / IF sy RFID, Sensors, Transducers, Switches, Relais, Capacitors, Optoelectronics ary Discrete Semiconductor.
BTombontsoa ho anao
Vonjeo ny fotoana. Vonjeo ny volanao.
Maherin'ny 900 an'arivony ny isa maromaro ao amin'ny tahiry mba hividianana avy hatrany Miaraka amin'ny fitaovana elektronika 6+ tapitrisa ao amin'ny Infinity-Electron.com. Ny tontolo manodidina ny famatsian-tsakafo an-tserasera dia miantoka ny vidim-pidirana ambany kokoa.
Infinity-Electron.com dia iray amin'ireo mpamatsy fitaovana elektronika lehibe indrindra manerantany indrindra. Ny iraka ataonay dia ny hanampy ny mpanjifanay haingana dia hahita ny fitaovana elektrika ilainy amin'ny vidin'ny fifaninanana.
100% New & Orininal Guaranteed, 1 Year Garantie For All Products. Orininina, singa elektronika avo lenta amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Ny asa tsara indrindra, ny famerenana haingana, haingana ny fifampiraharahany sy ny fanomezana. Alefaso aminay RFQ an-tserasera amin'izao fotoana izao, Ho valiny amin'ny 24 ora izahay.
Amin'ny fotoana rehetra, maherin'ny 2 tapitrisa fitaovana elektronika azo alaina ary vonona ny halefa any amin'ny foibenay any Hong Kong.
Miezaka mafy hitady, maharitra ela, fiafarana (EOL) ary singa elektronika tsy misy fotony.
Hiantehantsika ny soso-kevitra mety! Raha mandray tsara kokoa ianao. Miangavy anao mba hifanerasera aminay ary hanao izay tsara indrindra vitanao izahay mba hitoriana na hikapoka ny voalazanao tsara indrindra.
Ny solosaina azo itokisana elektronikan-kojam-pitaovam-baovaona Infinity-Electron.com
Mirehareha izahay manolotra anao ny vokatra faran'izay be mpampiasa indrindra, anisan'izany ny famoahana farany avy amin'ireo mpamokatra elektronika manerantany.
Ny marika tombony dia: Xilinx, Altera, Microsemi, Microchip, Lattice, Texas Instruments, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Maxim Integrated, Cypress, Fairchild, ON Semiconductor, Zilog, Intel, Honeywell, Panasonic, Broadcom, Omron, Sharp, KEMET, AVX , TE Connectivity, ary bebe kokoa ...
Faly izahay manolotra anao ny vokatra faran'izay be mpampiasa indrindra, anisan'izany ny famoahana farany avy amin'ireo mpanamboatra fitaovam-pifandraisana elektronika indrindra ao anatin'izany ny Integrated Circuits (ICs): PMIC, Memory, Logic, Linear, Interface, Embedded FPGAs, CPLDs, Microprocessors, Microcontrollers, Resistors, Capacitors, Switches, Sensors, Transducers, RF / IF sy RFID, Semiconductor Modules, Relais ary fitaovana elektronika hafa.
Fiantohana herinaratra - Tafio-bala
Power Supplies - ivelany / anatiny (Off-Board)
dia manome vahaolana mivantana sy mahafa-po mahomby amin'ny OEMs, CEMs, mpivarotra, ny filan'ny orinasa sy orinasa hafa. Mitondra fitaovana elektronika avo lenta isika amin'ny loharanom-pitokisana mba hamaha ny olana momba ny varotra sy hanome sehatra fizarana ho an'ny tahiry mihoatra.
Azontsika atao ny mamaha ny olana saro-pantarina indrindra amin'ny solosainao:
Ireo fitaovana elektronika sarotra finday
Ny kalitao avo lenta sy ny fifaninanana
Singa iray mijanona ho an'ny Electronic Components
Ny fividianana ambany kokoa, fandefasana maimaim-poana